SEO ခေါင်းစဉ် (ဥပမာများဖြင့်) အတွက်သင်၏ခေါင်းစဉ်အမှတ်အသားများကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မလဲ။
သင်၏စာမျက်နှာသည်သင်ပြချင်သည့်နေရာပေါ် မူတည်၍ ခေါင်းစဉ်များစွာရှိနိုင်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ထဲမှာစာမျက်နှာတစ်ခုတည်းအတွက်ရနိုင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးခုရှိတယ်။
ခေါင်းစဉ် Tag - သင်၏ browser tab တွင်ပြပြီးရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်အညွှန်းပြထားသော HTML ဖြစ်သည်။
စာမျက်နှာခေါင်းစဉ် - ၎င်းကိုအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ရန်သင်၏အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၌သင်၏စာမျက်နှာကိုသင်ပေးထားသောခေါင်းစဉ်။
စာမျက်နှာခေါင်းစဉ် - ပုံမှန်အားဖြင့်သင့်စာမျက်နှာ၏ထိပ်ရှိ H1 သို့မဟုတ် H2 tag ကိုသင့် visitors ည့်သည်များသည်မည်သည့်စာမျက်နှာပေါ်တွင်သူတို့ရှိနေကြောင်းကိုအသိပေးလိမ့်မည်။
Rich Snippet ခေါင်းစဉ် - လူတွေကိုသင်၏လူမှုမီဒီယာကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာလူတွေကိုဝေမျှတဲ့အခါသင်မြင်ချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အဲဒါကို preview မှာပြလိမ့်မည်။ ကြွယ်ဝသောအတိုအထွာတစ်ခုမရှိလျှင်၊ လူမှုရေးပလက်ဖောင်းများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ခေါင်းစဉ် tag ကိုပုံမှန်အတိုင်းသတ်မှတ်လိမ့်မည်။
ငါစာမျက်နှာတစ်ခုထုတ်ဝေတဲ့အခါငါမကြာခဏဤအရာတစ်ခုချင်းစီပိုကောင်းအောင်။ လူမှုရေးတွင်ငါဆွဲဆောင်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ ရှာဖွေတဲ့အခါငါသော့ချက်စာလုံးတွေကိုသုံးနေတာသေချာအောင်လုပ်ချင်တယ်။ ခေါင်းစဉ်များအနေဖြင့်၊ အောက်ပါအကြောင်းအရာများအတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုပေးပါစေ။ အတွင်းပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုရှာဖွေသောအခါကျွန်ုပ်၏စာမျက်နှာကိုအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဤဆောင်းပါးအတွက်သင်၏အကောင်းဆုံးကိုကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်သွားမည်ဖြစ်သည် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက်ခေါင်းစဉ် tag ကို.
ခေါင်းစဉ် tags များသင်ရှာဖွေလိုသည့်ရှာဖွေမှုဝေါဟာရများအတွက်သင့်အကြောင်းအရာများကိုမှန်ကန်စွာရည်ညွှန်းသည့်အခါစာမျက်နှာ၏အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ၎င်းသည်အရာအားလုံးကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ SEO ဆိုသည်မှာကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ပင်မစာမျက်နှာခေါင်းစဉ်ကိုအသစ်ပြောင်းပါ ပင်မစာမျက်နှာ။ ငါသူတို့ home page ခေါင်းစဉ်ကိုအမြင့်ဆုံးမထားဘူးတဲ့ site ကိုငါမြင်သောအခါတိုင်းလြှော့! သင်သည် Home ဟုခေါ်သောအခြားစာမျက်နှာတစ်သန်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နေသည်။
ခေါင်းစဉ်အညွှန်းတစ်ခုအတွက် Google ကဘယ်လောက်အက္ခရာများပြသသလဲ
မင်းရဲ့ title tag ကအက္ခရာ ၇၀ ထက်ကျော်နေရင် Google ကသုံးနိုင်တယ် သင့်ရဲ့စာမျက်နှာကနေကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းအရာ အစား? အကယ်၍ မင်းကစာလုံးရေ ၇၅ ထက်ကျော်မယ်ဆိုရင် Google ကပဲသွားမယ် အက္ခရာ ၇၅ လုံးထဲမှအကြောင်းအရာကိုလျစ်လျူရှုပါ? စနစ်တကျပုံစံချထားသောခေါင်းစဉ် tag ကိုဖြစ်သင့်သည် အက္ခရာ ၅၀ မှ ၇၀ အကြား။ မိုဘိုင်းရှာဖွေမှုများသည်အနည်းငယ်သောစာလုံးများကိုအစွန်အဖျားကျစေနိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အက္ခရာ ၅၀ မှ ၆၀ ကြားပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
အခြားအတိုင်းအတာတစ်ခုမှာကုမ္ပဏီတော်တော်များများကသူတို့မလိုအပ်သော (သို့) ကျယ်ပြန့်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုထုပ်ပိုးပြီးသူတို့ထဲမှာထည့်ရန်ကြိုးစားသည်ကိုငါတွေ့ရသည်။ ခေါင်းစဉ် tags များ။ လူအများကကုမ္ပဏီ၏နာမည်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်ကိုတင်ကြသည်။ သင်သည်သင်၏အဆင့်အတန်းကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်လျှင် branded သော့ချက်စာလုံးများခေါင်းစဉ်များသည်သင်၏ကုမ္ပဏီအမည်မပါဝင်ပါ။
သင်တစ်ဦးရှိ အကြီးစားအမှတ်တံဆိပ်။ ငါမှန်ရင် New York Times ကိုဥပမာအားဖြင့်, ငါကထည့်သွင်းချင်တယ်။
သငျသညျ အမှတ်တံဆိပ်အသိပညာလိုအပ်ပါတယ် နှင့်အလွန်ကြီးစွာသောအကြောင်းအရာရှိသည်။ ငယ်ရွယ်သောဖောက်သည်များသည်ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်မကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာအချို့ကိုအကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
မင်းမှာကုမ္ပဏီနာမည်ရှိတယ် သက်ဆိုင်ရာသော့ချက်စာလုံးပါဝင်သည်. Martech Zoneဥပမာအားဖြင့်, ကတည်းကအသုံးဝင်သောလာနိုင်ပါတယ် MarTech တစ် ဦး လေ့ရှာဖွေဝေါဟာရကိုဖြစ်ပါတယ်။
မူလစာမျက်နှာစာမျက်နှာခေါင်းစဉ် Tag ကိုဥပမာ
home page တစ်ခုကိုပြုလုပ်ရာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အောက်ပါပုံစံကိုသုံးသည်
သင်၏ထုတ်ကုန်၊ ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုဖော်ပြသောသော့ချက်စာလုံးများ ကုမ္ပဏီအမည်
fractional CMO, အတိုင်ပင်ခံ, နာယက, စာရေးသူ, Podcaster | Douglas Karr
သင်၏အရောင်းမြှင့်တင်ရေးနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးတိမ်တိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု | Highbridge
ပထဝီစာမျက်နှာခေါင်းစဉ် Tag ဥပမာများ
မိုဘိုင်း Google ရှာဖွေမှုအားလုံး၏သုံးပုံတစ်ပုံခန့်သည်တည်နေရာနှင့်သက်ဆိုင်သည် အပြာရောင် Corona။ ငါပထဝီဝင်စာမျက်နှာတစ်ခုအတွက်ခေါင်းစဉ်အမှတ်အသားများကိုပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အောက်ပါပုံစံကိုသုံးသည်။
စာမျက်နှာကိုဖော်ပြရန်သော့ချက်စာလုံးများ | ပထဝီအနေအထား
Infographic ဒီဇိုင်းန်ဆောင်မှုများ | Indianapolis, Indiana ပြည်နယ်
ခေါင်းစဉ်စာမျက်နှာခေါင်းစဉ် Tag ဥပမာများ
စာမျက်နှာကိုဖော်ပြရန်သော့ချက်စာလုံးများ | အမျိုးအစားသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်း
ကမ်းတက်စာမျက်နှာ Optimization | တစ် ဦး ကလစ်နှိပ်ပါဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးဆောင်
မေးခွန်းများခေါင်းစဉ် Tags အတွက်ကြီးစွာအလုပ်လုပ်ကြသည်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအွန်လိုင်းရှာဖွေမှုအားလုံး၏ ၄၀% ခန့်သော့ချက်စကားလုံးနှစ်လုံးပါရှိသည်။
ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အွန်လိုင်းရှာဖွေမှု၏ ၈၀% ကျော်သည်စကားလုံးသုံးလုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်မကသောသူများဖြစ်သည်။
ဂူဂဲလ်ရှာဖွေမှု၏ ၃၃% ကျော်သည်စကားလုံး ၄ လုံးထက်ပိုသည်
SEO အတွက်သင့်ခေါင်းစဉ် Tag ကိုဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲ။
အသုံးပြုသူများသည်အသုံးပြုနေကြသည် ဘယ်သူလဲဘာလဲဘာကြောင့်လဲ သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေဟာအရင်ကထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ ရှာဖွေရေးရှာဖွေမှုနှင့်လိုက်ဖက်သောမေးခွန်းခေါင်းစဉ်တစ်ခုရှိခြင်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောရည်ညွှန်းကိုးကားခြင်းနှင့်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာသို့ရှာဖွေခြင်းလမ်းကြောင်းအချို့ကိုမောင်းထုတ်ရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အခြားဆိုဒ်များစွာသည် title tag များအကြောင်းရေးသားခဲ့ကြသည် title tag SEO ဆိုသည်မှာ သူတို့ဆိုဒ်များသည် SEO နှင့်သက်ဆိုင်သောဝေါဟာရများကိုလွှမ်းမိုးထားသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်သူတို့နှင့်အစဉ်မပြတ်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်မသေချာပါ။ ဒါကြောင့်ငါကဆက်ပြောသည်ပါတယ် ဥပမာ ငါ၏အ post ကိုခွဲခြားရန်နှင့်ပိုပြီးကလစ်မောင်းဖို့ကြိုးစားရန်!
မင်းတတ်နိုင်သလောက်အက္ခရာတွေများများသုံးဖို့တွန့်ဆုတ်နေစရာမလိုပါဘူး။ ပထမ ဦး ဆုံးမြင့်မားသောအာရုံစိုက်သောသော့ချက်စာလုံးများကိုအသုံးပြုခြင်း၊ နောက်မှပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဝေါဟာရများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ဖြစ်သည်။
သင် WordPress တွင်ရှိပါကထိုကဲ့သို့သောကိရိယာများ Math SEO ပလပ်အင်ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ပါ သင့်ရဲ့ post ခေါင်းစဉ်နှင့်သင့်စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်နှစ်ခုလုံးကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုသည်။ နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားပါသည်။ WordPress site တစ်ခုဖြင့် post ခေါင်းစဉ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်စာသား၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ title tag တစ်ခုအတွင်း၌ရှိပြီးသင့်စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်မှာ၎င်းသည် ခေါင်းစဉ် tag ကို အဲဒါကို ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွေက ဖမ်းတယ်။ WordPress SEO ပလပ်အင်မပါဘဲ၊ နှစ်ခုသည် တူညီနိုင်သည်။ အဆင့်သင်္ချာ နှစ်ခုလုံးကိုသင်သတ်မှတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်စာမျက်နှာ၌ဆွဲဆောင်မှုရှိသောခေါင်းစဉ်နှင့်ရှည်လျားသောခေါင်းစဉ်ကိုသုံးနိုင်သည် - သို့သော်စာမျက်နှာခေါင်းစဉ် tag ကိုသင့်လျော်သောအရှည်သို့ကန့်သတ်ထားသည်။ အက္ခရာအရေအတွက်ဖြင့်၎င်းကိုအစမ်းကြည့်နိုင်သည်။
Google ရှာဖွေမှု ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုယခုမိုဘိုင်းလ်ဖြင့်ပြုလုပ်သည် အဆင့်သင်္ချာ mobile preview (ညာဘက်ထိပ်မှမိုဘိုင်းခလုတ်) ကိုလည်းပေးသည်။
သင်၏ဆိုရှယ်မီဒီယာအတွက်သင်၏ကြွယ်ဝသောအတိုအထွာများကိုပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်ပလပ်အင်တစ်ခုမရှိပါက၊ ခေါင်းစဉ် tags များ သင် link တစ်ခုဝေမျှသည့်အခါလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများကမကြာခဏပြသလျက်ရှိသည်။
ကလစ် နှိပ်၍ မောင်းသောတိကျပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသောခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုတီထွင်ပါ။ သော့ချက်စာလုံးများကို you ည့်သည်ကအာရုံစိုက်လိမ့်မည်ဟုသင်ယုံကြည်သောအရာအပေါ်အာရုံစိုက်ပါ။ ပြီးတော့မမေ့ပါနဲ့ သင့်ရဲ့ meta ဖော်ပြချက်ပိုကောင်းအောင် မှတဆင့်နှိပ်ရန်သင်၏ရှာဖွေသူအသုံးပြုသူကိုမောင်းထုတ်ရန်။
Pro ကိုအကြံပေးချက်: သင်၏စာမျက်နှာကိုထုတ်ဝေပြီးနောက်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဤကဲ့သို့သောကိရိယာဖြင့်သင်မည်သို့အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်သည်ကိုကြည့်ပါ Semrush။ ကွဲပြားခြားနားသောသော့ချက်စာလုံးပေါင်းများစွာအတွက်သင်၏စာမျက်နှာသည်အဆင့်သတ်မှတ်သည်ကိုသင်တွေ့ပါက၎င်းသည်ပိုမိုနီးကပ်စွာကိုက်ညီရန်သင့်ခေါင်းစဉ်အညွှန်းကိုပြန်လည်ရေးထည့်ပါ (အကယ်၍ သက်ဆိုင်ပါက) ။ ကျွန်ုပ်၏ဆောင်းပါးများကိုကျွန်ုပ်ဤသို့အမြဲတမ်းလုပ်သည်။ ရှာဖွေရေးခလုတ်တွင် click-through နှုန်းသည်ပိုမိုမြင့်တက်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်ကြည့်နေသည်။
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ငါအဘို့အကြှနျုပျ၏ Affiliate link ကိုအသုံးပြုနေသည် Semrush နှင့် အဆင့်သင်္ချာ အထက်။
Tags: htmloptimizationစာမျက်နှာခေါင်းစဉ်သင်္ချာ seo အဆင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimizationseoခေါင်းစဥ်title tag ဇာတ်ကောင်title tag သော့ချက်စာလုံးများခေါင်းစဉ် tag အရှည်ခေါင်းစဉ်ကို tag optimizationခေါင်းစဉ်ကို tag ကိုကြွယ်ဝသောအတိုအထွာseo ခေါင်းစဉ် tagခေါင်းစဉ် tags များရှာဖွေရေးမေးမြန်းချက်အတွက်စကားလုံး
HTML Email Design ၏ စိန်ခေါ်မှုများ (နှင့် စိတ်ပျက်စရာများ) ကို နားလည်ခြင်း။
16:2012 pm မှာအောက်တိုဘာ 9, 34
ခေါင်းစဉ်တက်ဂ်သည် အရေးကြီးဆုံး မက်တာဒြပ်စင်ဖြစ်ပြီး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝဘ်ဆိုဒ်အများအပြားသည် ကုမ္ပဏီအမည်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဤနေရာကို ဖြုန်းတီးခြင်း၏ အမှားကို ပြုလုပ်ကြသည်။ စာမျက်နှာပေါ်ရှိအရာများကို ဖော်ပြရန် သော့ချက်စကားလုံးများကို အသုံးပြုသင့်သည်။
1:2012 pm မှာနိုဝင်ဘာ 1, 21
အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ပို့စ်နှင့် အသေးစိတ်အချက်များ… အနာဂတ်တွင်၊ ဤအရာကို ခေါင်းစဉ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း သမ္မာကျမ်းစာအဖြစ် ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ လက်ခုပ်သံများ..
1:2012 pm မှာနိုဝင်ဘာ 1, 38
အများကြီး @wiseStep တန်ဖိုးထား!
မေလ 14, 2013 မှာ 3: 36 pm တွင်
စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်ပြီးရင် ဘလော့ဂ်ခေါင်းစဉ်ကို ဆက်မလုပ်ချင်ပေမယ့် ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ ကျွန်ုပ်သည် All In One Seo Pack ပလပ်အင်ကို အသုံးပြုနေပြီး %page_title% ပြီးနောက် %blog_title% ကို ဖယ်ရှားခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ၎င်းသည် %page_title% ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ဆက်ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။ header.php တွင် ခေါင်းစဉ်ကုဒ်ဖြစ်ပြီး page.php တွင် ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဘာလုပ်သင့်လဲ ဆိုတော့ စာမျက်နှာ ခေါင်းစဉ်ပြီးရင် ဘလော့ဂ် ခေါင်းစဉ်က ဆက်မှာ မဟုတ်ဘူး။
မေလ 14, 2013 မှာ 4: 00 pm တွင်
သင်၏ဆက်တင်များကို All In One SEO Pack Plugin မှ ရိုးရိုးသားသားထုတ်ပြီး WordPress အတွက် Yoast SEO Plugin ကို ထည့်သွင်းပါမည်။ ၎င်းတွင် ဆက်တင်များကို သင်ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး အထက်တွင်ပါရှိသည့်အရာများသည် အလုပ်ဖြစ်သင့်သည်။